25 martsa:Fankalazana ny nilazana fa naka nofo ny Tompo – Trinitera Malagasy
Fankalazana ny nilazana fa naka nofo ny Tompo
Vakiteny I : Izaia 7,10-14.8,10b.
Vakiteny II : Hebrio 10,4-10.
Evanjely : Md Lioka 1,26-38.
Efa hatry ny ela, efa tany amin’ny taonjato IV tany ho any no efa nankalazana ity fety ity, Fetin’ny Tompo, izay noraiketina ny 25 martsa nandritra ny Taonjato VII, rehefa nahazo vahana ny fankalazana ny Noely ny 25 desambra. Saingy noho ny fitomboan’ny “fanajana an’i Masina Maria”dia niova tsikelikely ka lasa fetin’i Masina Maria io fety io. Ankehitriny, taorian’ny Konsily Vatikana II, dia niverina hoe fankalazana ny “nilazana fa naka nofo ny Tompo”, fetin’ny Misterin’ny fahatongavana ho nofo. Fototry ny finoantsika manko ny maha-olombelona an’i Jesoa, ilay zanak’Andriamanitra, tena Andriamanitra. Fandalinana sy fampianarana mikasika izany maha-Andriamanitra sy maha-olombelona an’i Jesoa izany no nimasoan’ny Fiangonana hatrany am-piandohana. Na ny drafitra narahan’i Md Lioka amin’ny fanoratana ny Evanjeliny aza dia manampy antsika hahazo izany Mistery izany, ka hampihatra azy amin’ny fomba fiainana andavanandro.
Nofidian’Andriamanitra manokana i Masina Maria, ny antony hoy i Lioka dia satria nahita ny fanambaniana (ταπείνωσις tapeinosis) nahazo ny ankizivaviny, nahita ny fahorian’ny vahoakany. Tombom-pitiavana izany, saingy tsy ho an’i Maria ihany fa ho antsika rehetra, ho an’ny olombelona tsirairay. Fa tahaka ny fitiavana rehetra, tsy manery fa miangavy. Ny “eny” nataon’i Maria no mirakitra ny halehibeazany, ka izay te ho zanany, izay te ho sambatra miaraka aminy, izay fatra-panaja azy marina tokoa, dia ho lany andro hitanisa ny “arahaba ry Maria” fotsiny, raha tsy mitombo miaraka amin’ny isan’izay voatanisa ny faniriana hanao “eny” amin’ny tolo-pitiavana iantsoan’Andriamanitra antsika mba hahatongavan’i Kristy ho nofo eo amin’izao tontolo izao.
Arahaba ry ilay feno hasoavana, ny Tompo ao aminao (χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ κύριος μετὰ σοῦ, Kairé, keKaritomenè, Ho Kyrios metà sou. Lk 1, 28). Arahaba moa no nandikana azy, fa fiarahabana manokana kosa no dikany: kairé kekaritomenè: mifalia ianao izay nohasoavina. Antsoin’ny Anjely hifaly i Maria. Araka ny voalazantsika teo aloha dia tsy hoe fiainana milamina, tsy hoe harena sy voninahitra no niainan’i Maria fa “tapeinosis”, tsy fihetren-tena fotsiny fa fiainana tsizarizary, toa tsy afaka ny hiarina akory. Taratr’ilay “Siona” niandry ny fanambaran’Andriamanitra manko i Masina Maria, ao aminy no tanteraka ny fampanantenan’Andriamanitra, niantso ny vahoakany hifaly (Jereo ohatra Sofonia 3,14-18; Zakaria 2, 14; 9,9-10). Tanteraka izany fampanantenana izany satria nahay “nanaiky” i Maria, ilay ankizivavin’ny Tompo.
Ahoana no hahafahana mifaly, ahoana no hahitana ny fahasoavan’Andriamanitra ao anatin’ny fahoriana? Ho an’i Masina Maria manokana dia tsy maintsy hiatrika ny fiainana izy: iza no hino fa “zanak’Andriamanitra” ilay zaza torotoronina tao an-kibony? Ahoana ary no hahatsapana fa na eo aza ny fijaliana sy ny adim-piainana (ny valan’aretina sy ny fahalovan’ny fahotana) dia “tian’Andriamanitra manokana” tahaka an’i Masina Maria isika tsirairay avy? Ny fandinihana ny halehibeazan’ny finoan’ity zazavavy kely ity no manampy antsika hanao dingana amin’ny finoana koa. Isika manko efa nohasoavina ary mino ny fitsanganan’i Kristy ho velona. I Maria kosa nanomana izany tam-pinoana. Sambatra izy, tsy nahita kanefa nino fa “momba ny vahoakany Andriamanitra”, tsy mandao ny vahoakany Andriamanitra, “ilay Misy” no Anarany, “Emanoela, Andriamanitra miara-monina mandrakariva amintsika”.
Rariny araka izany raha “atao tsara laza” (εὐλογημένη eulogèmenè, nadika hoe nosoavina) noho ny vehivavy rehetra i Masina Maria, tsy afaka ny tsy hibanjina ny halehibeazan’ny finoany izay te hanara-dia an’ilay “zanak’Andriamanitra”, tonga nofo vokatr’izany faneken’i Maria izany (καρπός karpos), ary izay manao tsara laza an’i Maria dia “ankalazaina” koa ilay nateraky ny kibony, ary Andriamanitra Ray no voalohany mitsodrano sy mankalaza Azy. I Maria no loharano nahazoantsika ny “loharanom-pahasoavana” hoy i Md Bernard, raha avy aminy no nahazoantsika ny Mpamonjy, fahasoavana inona no tsy homen’ANdriamanitra amin’ny alalany? Tsy afaka ny tsy ho any an-doharano izay maniry hatsaka rano. Tsy afaka ny tsy hanaja an’i Masina Maria izay te ho tonga mpianatr’i Jesoa, satria ao aminy no ianarantsika rehetra ny fanekena ny Teny, ka hahatonga nofo Azy ao amin’ny fiainantsika.
Ambaran’i Md Lioka koa fa i Masina Maria no tena “Mpanompon’Andriamanitra” (ἡ δούλη κυρίου,·Hè doulè Kyriou, Lk. 1,38). Raha fakafakaina moa ny anarana hoe Maria, ankoatra ireo izay niezahana nandikana azy (malala, kintan’ny ranomasina…), ny fototeny מָרָה (marah) amin’ny teny hebrio dia midika hoe mandà, mihoko, mikomy. Na dia fatra-pandà, fatra-pihoko sy mpikomy aza ilay “zanaka vavin’i Siona”, i Maria kosa, feno hasoavana satria nahay “nanaiky”. Izany fanekena izany no maha-mpanompon’Andrimanitra azy. Tsy fihetren-tena ny filazana fa mpanompon’Andriamanitra izy, raha ny marina, fa fanandratana kosa, fankalazana (εὐλογέω, eulogeo), entin’i Md Lioka milaza fa i Masina Maria no ilay “Mpanompovavy” sitrak’Andriamanitra, tsy ambakan’ireo Mpanompon’Andriamanitra hafa voatanisa ao amin’ny Baiboly, toa an-dry Abrahama, ry Moizy sy Elia Mpaminany. Ilay Zanaka tonga nofo tao an-kibony moa no ilay “Mpanompon’YHWH, sitraky ny fony”, araka an’Izaia (Vakiteny mandritra ny herinandro masina).
Asan’ny Fanahy Masina no manavao ny zavatra rehetra. Iraho ny Fanahinao, ry Tompo, dia ho àry ny zavatra rehetra (Salamo 104, 30). Dia tao amin’ny faneken’i masina Maria no nahafahan’Andriamanitra nanavao ao amin’ny Zanany tonga nofo ny fitiavany antsika rehetra. I Masina Maria kosa, niandry ampitokiana ny fahatanterahan’ny lahatr’ilay tia mandrakizay: “Aoka ho tanteraka amiko araka ny teninao”. γένοιτό μοι, (genoito moi, Lk. 1,38), ny matoateny γίνομαι (ginomai), izay midika hoe tanteraka, miseho miariary, fa amin’ny “temps” aoriste optatif, izany hoe lazain’i Md Lioka fa indrakindrafana be ihany i Maria mandrapahatanterak’izany sitrapon’Andriamanitra izany.
Ny famerimberenana ny fiarahaban’ny Anjely dia tokony halemombelona ao anatintsika koa ny faniriana izany hafaliana sitrak’Andriamanitra ho tonga lafatra ao amin’ny zanany rehetra izany. Ny Teny tonga nofo tao amin’i Masina Maria no sitrany koa ho tonga nofo ao amintsika tsirairay avy. Asan’ny Fanahy Masina izany kanefa kosa miankina amin’ny fanekentsika ka hamelantsika azy hiasa.
Isika tsirairay avy koa dia efa samy nandray ny Fanahy Masina. Ohatra ho antsika i Masina Maria amin’ny fanekentsika hovolavolain’ny Herin’ny Avo indrindra ka hahafahantsika mivelona araka ny Evanjely, hiteny toa an’i Md Paoly fa tsy isika intsony no velona fa Izy Kristy no velona ao amintsika.
Hanahaka an’i Masina Maria anie isika hanetry tena [izany hoe hankatò ny herin’Andriamanitra mandahatra ny zavatra rehetra] sy hiraiki-po amin’izay sitrak’Andriamanitra ary ny fanajana azy sy ny fanaovana sapile matetika anie hanampy antsika.
 Mode – Optatif (Optionnel) Le mode « optatif » s’emploie généralement dans les conditions de « quatrième type », qui expriment un désir, un souhait pour qu’une action dont on ignore le résultat puisse se réaliser. Ce mode est très rarement utilisé dans le Nouveau Testament, car il n’était presque plus en usage à cette époque. Dans quelques cas, le mode optionnel est utilisé sans clause conditionnelle, pour exprimer le très fort désir de voir se réaliser l’action considérée. Ceci correspond à ce qui apparaît dans la phrase « mh genoito », traduit par « A Dieu ne plaise! » (Luc 20:16) (cfr. Note Bibleworks 10)